ime njem na njem | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: njem na njem nleta
Ndị na-aga eleta ebe ntụrụndụ ụwa ndị ama ama, obi abụọ adịghị ya na ha anaghị agafe mba ndị dị ịtụnanya dị ka Spain. Ezumike n'akụkụ nkuku ụwa a bụ ebe ntụsara ahụ kachasị mma! Mba a…
Nyocha banyere ụgbọ elu Boeing 737-800
Ihe na 15.09.2019 01.11.2019
Otu n'ime ndị ụgbọ elu ejirila n'ụzọ ụgbọ ala dị mkpụmkpụ na nke etiti maka ọtụtụ ndị na-ebu ụgbọ mmiri si n'akụkụ ụwa niile, gụnyere Russia, bụ Boeing 737-800. Nzaghachi ndị ọkachamara ...
Oke Osimiri Uhie na China. Oke Osimiri na-acha odo odo na maapụ
Ihe na 15.09.2019 17.12.2019
Ndi China kpọrọ Oke Huanghai nke Oke Osimiri. Ọ bụ nnukwu ala nke oke osimiri kachasị ukwuu n'ụwa - Pacific. Osimiri a, nke nwere ụdị aha dị iche dị, dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke mpaghara Eurasia, nke ọdịda anyanwụ na-asa ...
Ebee ka ị nwere ike izuike na ọnụ ala okpomọkụ na ụmụ
Ihe na 15.09.2019 19.11.2019
N’ebe ị ga-ezurutụ ike n’oge ọkọchị, nne na nna ọ bụla ga-agba mbọ ịhụ na nwa ya na-eleta oke osimiri n’oge ọkọchị. Iji mee nke a, ịkwesighi ịnwe obere akpa na nnukwu ...
Onu ogugu nke Saratov. Onu ogugu ndi Saratov
Saratov bụ nnukwu obodo n'akụkụ mmiri Volgograd, nke bụ mpaghara mpaghara otu aha. Otu ezigbo ogige, akụ na ụba na agụmakwụkwọ dị mkpa na mpaghara Volga. Isi okwu nke isiokwu a ga-abụ ọnụ ọgụgụ ndị bi na Saratov. Onu mmadu ole na-ebi ...
Uzo nke Ekaterinburg: adres, uzo
Ihe na 15.09.2019 18.12.2019
Yekaterinburg bụ isi obodo nke Urals. Otu n'ime obodo ndị kasị ibu na Russia. Ọ bụ ókè dị n'etiti Europe na Eshia, ma nwee ike ịsọ mpi na ọnụ ọgụgụ ụwa kachasị ukwuu. Ndụ ebe a dị mgbe niile na ...
Ogologo oge ochie nke Ukraine. Nkume na ebe ewusiri ike nke Ukraine
Castlọ a na-ahụ maka mgbe ochie bụ mgbe ebigoro dịka ebe ewusiri ike nke onye nwe feudal. Na-abụkarị nke a bụ nnukwu ụlọ, nke gụnyere ụlọ, nke ụlọ na nke na-agbachitere. Castles nke Ukraine site na 11 ruo 19 narị afọ na Ukraine ...
Ebeega na Krasnoyarsk maka ndị njem nleta: ndepụta nke nlegharị anya obodo
Krasnoyarsk bụ otu n'ime obodo ukwu na Siberia. Ọ dị n'akụkụ abụọ nke Osimiri Yenisei, nke na-ekewa obodo ahụ n'ọtụtụ mpaghara: akụ aka ekpe na aka nri. Onye ọ bụla nwere nke ya ...
Mekong bụ osimiri dị na Vietnam. Ọnọdụ ebe, nkọwa na foto nke Osimiri Mekong
Ihe na 15.09.2019 19.12.2019
Mekong bụ osimiri nke isi iyi ya dị na ndịda nke Tibetan Plateau, na Oke Tangla. Nke a bụ nnukwu mmiri mmiri Indochina Peninsula, nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia, yana nke anọ kachasị ukwuu ...
Nkwari akụ Montenegro, Montenegro, Budva Riviera, Becici: nyocha. Montenegro Beach Resort 4 *
Ihe na 15.09.2019 20.12.2019
Montenegro bụ ebe ezumike kachasị amasị ndị njem anyị. N'ịchọ maka ahụmịhe ọhụụ, ndị njem na-abịa ebe a maka ezumike nke Turkey ma ọ bụ Egypt. Montenegrin na-ahụ maka ọrụ klaasị mbụ, oke osimiri kacha ọcha…
"Sand Bay", Sevastopol: nkọwa na nyocha
Ihe na 15.09.2019 06.11.2019
Ebee ka ịchọta ebe na Crimea maka ezumike gị na ezinụlọ gị niile ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-atọ ụtọ? Anyị na-ewetara gị ntị ebe nchekwa ọdịnala na ntụrụndụ "Sand Bay". Sevastopol - obodo ebe nkwari akụ a dị, ga-anabata gị nke ọma ...
Mpaghara Sumy: obodo, mpaghara, obodo. Trostyanets, Akhtyrka, Sumy mpaghara
Akụkọ ihe mere eme nke mpaghara ọ bụla bara ụba n'ụdị dịgasị iche iche, mgbe ụfọdụ, na-agbanwe ndụ nke ihe omume ụmụ amaala ya. Mpaghara Sumy na-echekwa ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ na-eme na mpaghara ya kemgbe Oge Ọchịchị ...
Akwụkwọ ịsa ahụ Kaluga: adres, foto, nyocha
Site n’oge ruo n’oge, ahụ mmadụ na-adakasị, iji nwee ike gbakee nke ọma, naanị ihe ọ ga-eme bụ izu ike ma zuru ike. Zọ kachasị mma iji nweta ntụrụndụ dị otú ahụ bụ ileta ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ sauna. Ndị ọma ...
Stlọ Stalin na Abkhazia: foto na nyocha
Ihe na 15.09.2019 21.12.2019
Comrade Stalin bụ onye gbadara n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa dịka ọmụmaatụ nke obi ọjọọ, ọchịchị aka ike, na mgbuchapụ. N’ezie, ekele dịrị ya, ihe a kpọrọ mmadụ bịara nwee ike ịkwụsị Hitler na fasizim ya. Ọ bụ ezie na ya onwe ya ...
Hotel Welcome Jomtien Beach Ebe 3 * (Pattaya, Thailand): nkọwa, foto na nyocha
Ihe na 15.09.2019 24.12.2019
Ọtụtụ na-eche na izu ike n'elu oké osimiri ga-ekwe omume naanị n'oge ọkọchị. Ma ọbụlagodi ezumike oyi abụghị ihe kpatara ịgọnahụ onwe gị ohere ịnweta ọmarịcha mara mma na igwu mmiri n'oké osimiri na-ekpo ọkụ ma dị nro. Akwa ...
Hotel Scandinavia (Sestroretsk): adres, nyocha
Ọ bụrụ na ịchọrọ tupu izu ike na nsogbu nke obodo, gaa na Scandinavia Hotel. Sestroretsk na ikuku ya dị ọcha na ọdịdị mara mma bụ otu nhọrọ kachasị mma maka ...
Nkwari akụ Hotel Linda Seaview 4 * (Hainan, China): nkọwa, ọrụ, foto na nyocha
Hainan bụ agwaetiti China nke dị na latitude nke ebe okpomọkụ na ndịda obodo ahụ. A na-akpọ ya "ọwụwa anyanwụ Hawaii." Taa, n'agabigaghị ya, ọ bụ ebe a kacha mara amara na Middle Kingdom. Site n'ụzọ, n'afọ ndị na-adịbeghị anya ọ mụbara…
Metro Vyborgskaya: akụkọ ihe mere eme na ụbọchị anyị
Ihe na 15.09.2019 25.12.2019
Na mpaghara akụkọ ihe mere eme nke St. Petersburg, nke a kpọrọ "Vyborg Side", na 1975, a mepere ọdụ ụgbọ mmiri Vyborgskaya. N'agbanyeghi eziokwu na ulo ulo ya enweghi ogwugwu, dika ulo nke ulo mbu…
Sanatoriums nke Berdyansk. Sanatorium "Lazurny", Berdyansk. Berdyansk - sanatorium "Niva"
Ihe na 15.09.2019 01.10.2019
Berdyansk ntụrụndụ (Ukraine) bụ ebe a ma ama maka njem ahụike. Ọtụtụ ihe na-atụnye ụtụ na nke a, tumadi ọnọdụ ihu igwe dị nfe na ebe dị mma Ebe a na-eme njem ahụ dị n'ụsọ oké osimiri. A ma ama Berdyansk maka ọgwụgwọ ya…
Ndi Consulates, ebe nleta ndi njem na ndi njem nke ndi Greek na Russia - n’ime obodo ha ka ha di?
Ihe na 15.09.2019 03.12.2019
Gris bụ mba magburu onwe ya nke masịrị ọtụtụ ndị njem. Na ndị Russia enweghị isịneke. Iji nweta visa, nke bụ ikike ịbanye n'ime obodo a, ịchọrọ…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,366.